Semalt Expert no manamarina ireo mpilalao folo voalohany manerantany 2017 mba hiarovana anao
An-tapitrisany ireo mpampiasa aterineto no manahy momba ny spam isan'andro. Ho an'ilay olona fanta-daza, misy mailaka vaovao amin'ny mailaka dia atomboka amin'ny fampitandremana. Ny antonta dia maneho fa ny spam dia mieli-patrana amin'ny alàlan'ny mailaka. Tamin'ny volana Novambra 2016, ny hafatra momba ny spam dia nahitana 61.66 isan-jaton'ny fifamoivoizana mailaka eran-tany - canadian dedicated servers. Midika izany fa maherin'ny 82 lavitrisa spam mailaka no nivezivezy eran'izao tontolo izao isan'andro. Mety hanakorontana anao izany fa manodidina ny 80 isan-jaton'ny spam dia entin'ny tarika madinidinika madinidinika.
Ny Frank Abagnale, mpitantana ny Success Successor an'ny Semalt , dia manoritsoritra ireo mpilalao 10 manerantany amin'ny taona 2017 mba hiarovana anao.
Ny Pharmaceutique Pharmacea angamba no mpamolavola spam manerantany indrindra. Heverina fa miorina ao Ukraine / Rosia, ary mampiasa teknika botnet samihafa sy tranonkala Shinoa isan-karazany mba hikolokolo ny tambajotra ary hanaparitaka ny 'spam pharma'. Ao amin'ny spams an-tapitrisany no mandefa isan'andro, ny Pharmaceutical Pharmaceutique dia mihevitra ny tenany ho loharanon-kainkintana tsara indrindra sy fanafody manatsara ny lahy.
2. Michael Boehm sy Associates
Ity dia orindrahindran'ny spams efa hatry ny ela izay miasa eo amin'ny samy anaran'ny olona tsirairay sy ny orinasa. Mampiasa domains tsy dia lafo sy maimaim-poana izy io ary ny IP an'ny Hosting VPS mba hampiroboroboana ny habetsaky ny spam.
Ny spammer matsiro matsiro Ny kobeni Solutions dia miorina any Florida ary heverina ho mpiara-miombon'antoka amin'i Darrin Wohl, spammer malaza ROKSO. Tamin'ny taona 2014, Yair Shalev dia nomena didy handoa vola 350 000 dolara avy amin'ny Federal Trade Commission (FTC) amin'ny fifanarahana iray izay nampifandray azy amin'ny fandefasana mailaka mailaka amin'ny mpanjifa mandritra ny famoahana an'i Obamacare. Ao amin'ny mailaka, nampitandrina ireo nahazo azy izy fa raha tsy hikororoka avy hatrany ilay rohy nomena izy ireo hividy planina fiantohana, dia handika ny lalàna izy ireo
4. Dante Jimenez avy amin'ny Aiming Invest
Ity spammer ity dia miara-miasa amin'ny sasany amin'ireo spammers ratsy indrindra amin'ny botnet. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminy sy ireo mpiara-miasa aminy i Dante amin'ny aterineto amin'ny aterineto any Eoropa Atsinanana mba hananganana spam-botnety goavana.
5. Alvin Slocombe (Internet World Cyber ​​Services)
Alvin Slocombe amin'izao fotoana izao dia mampiasa maromaro maromaro, anisan'izany ny Brand 4 Marketing, Site Traffic Network, Ad Media Plus, eBox, ary RCM Delivery.
Ny iMedia Networks dia ny tompon'antoka efa antitra ho an'ny spamming an'i Lindsay. Izy io dia manolotra fampiantranoana tsy miankina amin'ny Internet ho an'ireo mpitsikilo malaza ROKSO. Ny mpanjifa an'i Lindsay sy iMedia Networks dia mampiasa ireo botnet zombies ary avy eo dia mampiantrano karazana spam-offshore. Ity spammer sy ny andohaliny ity dia mametraka adiresy IP avy amin'ny orinasa mandritra ny fotoana lava be sy mampiasa an'ity sehatra ity amin'ny spam.
7. Peter Severa (Peter Levashov) (14 taona)
Ity cybercriminal Rosiana ity dia fantatra fa anisan'ny mpitsikilika lava indrindra. Ny fanamafisany dia amin'ny alàlan'ny fanoratana sy fivarotana ny tranonkala spamware sy botnet. Izy koa dia ahiahina ho voarohirohy amin'ny famoronana sy famotsorana ireo trozona sy viriosy. Severa dia manana fikambanana miaraka amin'ireo Eoropeana Eoropeanina sy Eoropa Atsinanana Spammers. Izy dia mpiara-miasa amin'i Alan Ralsky, Amerikana spammer voaheloka.
Niorina sy nino ny nandositra avy tao Huntington Beach, Etazonia, RR Media dia mpampiantrano goavam-be avo lenta izay mampiasa anaran-tsamirery mba hanatanterahana ny asany. Ny aretina voarakitra an-tsoratra dia ny fandefasana mailaka tsy misy fanontaniany ho an'ireo tsy ampy taona, izay manafina azy ireo amin'ny alikaola sy ny filokana.
Nogadraina i Michael tamin'ny febroary tamin'ity taona ity taorian'ny nahitàna azy tamin'ny fifandonana tamin'ny fanodikodinam-bahoaka federaly tamin'ny alàlan'ny hetsi-pitenenany. Ny fanambarana dia nilaza fa ity spammer ity dia nampiasa menaka fitaratra (mampiasa sehatra maro sy IP) mba handefa mailaka an-tapitrisany an-tapitrisa farafaharatsiny farafaharatsiny 9.
Ny fikambanan'olom-bolo mahatsiravina dia miady amin'ny karazam-bala rehetra. Izy io dia mihazakazaka ho an'ny daholobe ho an'ny daholobe, mandroaka azy ireo ary manararaotra azy ireo hampiroborobo rindrambaiko sy fanafody sandoka ary mizara ankizy, sary vetaveta ary sary vetaveta. Ny spammer Okrainiana koa dia milaza fa "manome tolotra ara-bola".
Amin'ny fampiasana spam sy spammers mampiasa fomba amam-panao tsara kokoa, toy ny botnets, ny mpiserasera rehetra dia mila mitandrina tsara rehefa mijery Internet. Tsara ny mampivelatra sy mitazona ny fisainana sasantsasany rehefa manokatra mailaka vaovao satria ny ankamaroan'ny spam dia alefa amin'ny alàlan'ny mailaka. Tsy te-ho tafavoaka amin'ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony ireo ianao na amin'ny hafa.